> Resource> Android> Olee otú iji hazie Android Ndi ana-akpo si PC
Ya mere, m ọkọdọ ekwentị m sync'd m Facebook, Gmail, na Yahoo akụkọ .. Mgbe ọ sync'd ọ wetara na afọ nke kọntaktị .. Dị ka, WAAAYYY ọtụtụ .. Kasị nke ndị duplicates .. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ ime nke a n'ụzọ dị mfe, dị ka BỤGHỊ na ekwentị m? Dị ka ụfọdụ ụdị Android kọntaktị Manager? Ọ bụ naanị a nnukwu ihe mgbu na ịnyịnya ibu na-eme ya na ekwentị .. akpa ọchị .. E nwere ihe dị ka, ọtụtụ narị kọntaktị .. Ha-ha .. bụla ọ na aro?
Obibi na oyiri kọntaktị na na-na kọntaktị iji, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare MobileGo for Android (n'ihi na Windows ọrụ). Nke a Android kọntaktị Ọhazi na-enye gị ohere iji hazie kọntaktị site na PC gị conveniently. Na ya, ị nwere ike mbubata kọntaktị site na PC, Outlook, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail gị gam akporo ngwaọrụ, na Anglịkan. Ị nwere ike jikota ma ọ bụ hichapụ oyiri kọntaktsị na ogbe, idozi kọntaktị site aha ikpeazụ ma ọ bụ aha mbụ, na-etinye kọntaktị na ìgwè ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Obere ọrụ karịa Windows version, ọ na-enye gị ka ị na mbubata, bupu ma hichapụ kọntaktsị na Android ngwaọrụ.
Download a kọntaktị Ọhazi Android na-enweta ya salient atụmatụ.
Download nri mbipute a ngwá ọrụ. Ebe a, anyị na-elekwasị anya na Windows version - Wondershare MobileGo maka Andoroid. Ugbu a, na-ahapụ 'lelee nzọụkwụ on ahazi kọntaktsị na Android ọnụ. Wụnye na ẹkedori a kọntaktị Ọhazi maka Android na PC gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ a window dị ka nke a.
Cheta na: Ebe a, ị nwere ike nweta ihe ọmụma banyere Wondershare MobileGo for Android, dị ka na-akwado gam akporo ngwaọrụ, akwado Android OS na PC os.
Jikọọ gị android ka PC na WiFi ma ọ bụ eriri USB
Iji jikọọ gị android ngwaọrụ a PC, i nwere ike iji WiFi (eji na Windows version) ma ọ bụ eriri USB. Mgbe ahụ, gị gam akporo ngwaọrụ ga-egosi na isi window.
Hazie Android kọntaktị: Tinye na dezie kọntaktị
Na gị gam akporo ngwaọrụ ndekọ osisi, pịa "kọntaktị". Kọntaktị niile egosi na kọntaktị window. Pịa "New" ịgbakwunye a ọhụrụ kọntaktị. Na mmapụta window, ị nwere ike itinye ndị mbụ na aha ikpeazụ, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị ụlọ, setịpụrụ a pụrụ iche ụbọchị, dị ka ụbọchị ọmụmụ, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie a na kọntaktị na gị gam akporo ngwaọrụ, abụọ-pịa kọntaktị ma dezie ya.
Hazie kọntaktsị na Android: Import na mbupụ kọntaktị
Mbubata kọntaktị gị gam akporo ngwaọrụ, ị nwere ike pịa "Import / Export". Site ndọpụta menu, họrọ "Import kọntaktị site na kọmputa." Mgbe ọzọ esiri-ala ndepụta na-egosi na nri, ị nwere ike họrọ mbubata kọntaktị site na vCard faịlụ, Outlook, Windows Address Book na Windows Live Mail.
Mbupụ kọntaktị, ị kwesịrị ị na nne Mmetụta anya kọntaktị na ị chọrọ mbupụ. Pịa "Import / Export"> "Export kọntaktị ahọrọ na kọmputa" ma ọ bụ "mbupụ kọntaktị niile na kọmputa." Mgbe ahụ, bupu kọntaktị na Windows Live Mail, Outlook na Windows Address Book.
Hazie kọntaktị Android: jikota oyiri kọntaktị
Ọ bụ tedious obibi oyiri kọntaktsị na gị android ngwaọrụ. Ugbu a, ihe na-mfe. Pịa "De-oyiri", na ngwá ọrụ a ga-chọpụta ma na-egosi oyiri kọntaktị. Họrọ a egwuregwu ụdị na pịa "jikota".
Hazie kọntaktị site na Android: Hichapụ kọntaktsị na ogbe
Ngwa ngwa na mfe, na ị na-enwe ike ihichapụ tọn kọntaktị na oge. Họrọ kọntaktị ị na-aga ka ihichapụ. Pịa "Hichapụ".
Download MobileGo for Android iji hazie kọntaktsị na gị gam akporo ngwaọrụ!
Otú nyefee Data si ZTE ka Android
Ndabere Samsung ka Ígwé ojii na-gị Data N'ebe nile
Best 4 Android Mmalite Manager: Olee ka Android Mmalite Faster